အရမ်း သဘောကျတယ် ကို – Grab Love Story
အ သား စိုင်ချင်း အားပါပါ ရိုက်သံက တိတ်ဆိတ်သည့် ည ထဲ စည်းချက်မှန်မှန် ထွက်ပေါ်နေသည်။ ပြွတ်ပြတ် ပြွတ်ပြတ် နှင့် ငဖယ်ထောင်း ချိန် ငရုပ်ဆုံထဲ စေးကပ်နေသည့် ကျည်ပွေ့လို အသံမျိုးကိုလည်း သဲ့သဲ့ ကြားရတတ်သည်။ အသက်ရှူသံ ပြင်းပြင်းနှင့် ကြိတ်၍ ညည်းညူသံတို့ကိုလည်း တိုက်ခန်းကျဉ်းလေးထဲမှ သုံးထပ်သား နံရံပါးပါးတချပ်က မတားဆီးနိူင်။ “အင်း . . အ . . ရှီး . . အား . . ကောင်းလိုက်တာ . . လုပ် လုပ် . . မြန်မြန်လေး . . ” “ပြီးတော့မလား . . .” “ပြီးတော့မယ် . . . အား အ အ . . . ကောင်းလိုက်ထာ . . ” “အင်း . . အင်း . . ” “မောင်လည်း ပြီးတော့မယ် . . .” “အ . .အား . . .ပြီး ပြီ . . ” “အစ် . . အစ် . . အား . . . ” လေသံတိုးတိုး ကြိတ်ညည်းသံနှင့်အတူ အသားစိုင်ချင်း ရိုက်ခတ်သံ ပို၍မြန်ဆန်လာပြီး မကြာမီ ရုတ်တရက် ရပ်တန့်သွားတတ်တာ။ သက်ပြင်းချသံ၊ တီးတိုးစကားပြောသံ၊ မောကြီးပန်းကြီး အသက်ပြင်းပြင်းရှူသံ တို့ကား ယခုရက်ပိုင်း နီနီလှိုင် အဖို့ ညစဉ် ကြားနေကျ အိပ်ရာဝင် တေးသံများအလား။
လီးကို အပေါ်ပင့်၍ အောက်မှ မေးသိုင်းကြိုးကို ယက်ပေးသည်။ ဒစ်တဝိုက်ကို လျှာနှင့် ချိတ်ဆွဲ၍ ယက်သည်။ ကိုဆွေတင့်လီးကြီးကား မာတင်း၍ ကော့ထောင်နေပြီ။ အာရှ စံချိန်လွန် လီးကြီးပင်။ အရှည် ၇ လက်မ ခန့်ရှိ၍ လုံးပတ်မှာ လက်တဆုတ်ပင် မဆန့်ပေ။ ဂုဏ်ယူလောက်စရာ အသိသာဆုံးမှာကား လုံးလုံးချွန်ချွန် ဒစ်ကြီးက မှိုပွင့်ကြီးလို ကားထွက်နေကာ ပင်မ လုံးပတ်ထက် ပိုတုတ်နေခြင်းပင်။ ထွန်းမင်းတယောက် ကိုဆွေတင်မိန်းမ၏ ဖြဲထားသည့် ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားမှ ဆောက်ဖုတ်ပြူးပြူးလေးအား အထင်းသား မြင်နေရသည့်အပြင်၊ ကိုဆွေတင်၏ လီးကြီးအား မြတ်မြတ်နိူးနိူး၊ တယုတယနှင့် ကျင်လည်စွာ ပြုစုနေသည်ကို ကြည့်ရင်း အောက်မှ လီးကြီးမှာ ညဝတ် ဘောင်းဘီထဲမှ ထိုးထိုးထောင်ထောင် ဖြစ်ကာ ဘယ်လိုမှ ဖုံးဖိမရတော့အနေရခက်နေလေတော့သည် ….ပြီးပါပြီ
“ဆံနွယ်စိတ္တဇ ” (စ/ဆုံး)